10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo
Izincwajana zemininingwane travel, Izincwajana zemininingwane travel Switzerland, amathiphu isitimela sokuvakasha, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 31/12/2019)
abahambi Sexy ukwazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba abe uhambo ezinhle. Nge ukubhekisisa kahle kumephu, okuqinile uhlelo yezokuthutha, futhi okubaluleke kakhulu, imisebenzi emangalisayo - sewulungile yakho 10 izinsuku Switzerland travel. Futhi Okwalapho usohambweni ngokusebenzisa Europe, isitimela kungathatha wena cishe noma kuphi. Labo abafisa explorre Switzerland kudingeka babe nohlelo ngoba izwe ligcwele zokungcebeleka obumangalisayo. Uma udinga usizo noma ugqozi ekhuphuka nge uwedwa, ake abe look at 10 izinsuku Switzerland travel uhambo:
Usuku 1 of yakho 10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo – Geneva
Indawo lapho uqale uhambo lwakho kuzohluka, kodwa futhi wabeka izwi nazo zonke ezinye ukuhlala kwakho. abahambi eziningi zitusa kusukela ngo noma Geneva noma Zurich ngoba emadolobheni amakhulu kukhona zokuthutha Izikhumulo. Yini enye, ungazama lolu hambo emuva uma ungathanda - okubalulekile ukuba ujabule!
Uma ufika ku Geneva lokuqala, kukhona ngobuningi izinto ukubona ngosuku lwakho lokuqala e-Switzerland. Sincoma nokuyobona Old Town kanye City Centre. Ngaphezu kwalokho, the Treille Promenade kanye esihlalweni United Nations nazo nokuzwa ezinkulu.
Lyon, eBasel Izitimela
Paris Basel Izitimela
Lucerne, eBasel Izitimela
Kusukela ngo-Geneva ikunikeza ithuba eliyingqayizivele unamathela azungeze Lake Geneva isikhashana. Ukuze ngosuku lwesibili eSwitzerland, kuyoba ekahle ukuvakashela edolobheni Montreux, izungezwe eduze kwechibi.
It’s only a short ngesitimela kude Geneva, futhi kuyakufanelekela kokubona. Yini enye, labo abathanda izinqaba medieval uzobe yalobu Chateau de Chillon, nabathandi bemvelo ngeke ngokungangabazeki ukujabulela echibini.
Usuku 3 – Zermatt – I Alps, Switzerland
Ukuchitha isikhathi Switzerland ngaphandle kokubona ubuhle bemvelo I Alps Kungaba kufana nokuya gourmet yokudlela hhayi iyala ukudla. Futhi akukho sizathu miss it lapho i ekuseni isitimela kungathatha nibe Zermatt. Kusukela lapho, adventure yakho e-Alps usungaqala.
Kukhona kokukwenza Zermatt uma sezulu limnandi ngokwanele. Sincoma uhambo lwamahora-3 emhlabeni amachibi ezinhlanu, kusukela ngo Blauherd. Kuyinto ukushaywa amahle indlela enhle ukuqala Alps yakho nakho.
Usuku 4 – Zermatt – Nalapha NgoSuku 4 of 10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo
Ungathatha usuku lwakho yesine ukuhlola Zermatt ngokugcwele, njengoba lokhu ungomunye walabo Swiss ebukekayo intaba amadolobha. Kukhona emfuleni omangalisayo ukubona, kanye Matterhorn ukubuka. Uma ungumuntu onolwazi oluthé xaxa othatha, ungase uthathe ntambama ukubona Charles Kuonen Ukumiswa Ibhuloho.
Ngenxa yaleso, uzodinga ukuya Randa, lapho ukushaywa ukuba ibhuloho iqala. Kumayelana uhambo lwamahora-2 kuya kwebhuloho. Akuyona into umzila lula ukuqedela, futhi ibhuloho ayikanye eyethile inhliziyo. Nokho, bebona kuwufanele enkingeni.
Basel ukuze Izitimela Bern
Ukuze sithole ngokugcwele Alps, kufanele uthathe ithuba uthole emachibini ephakeme. Zermatt kuyinto enkulu yekucala ukuthi, njengoba ungase kalula ukufinyelela kokubili Matterhorn Glacier ngePharadesi nangalokho Gornergrat ukusuka lapho.
Kuthatha ezinye ngamakheshi ukufinyelela phezulu Matterhorn Glacier ePharadesi noma ride Isitimela Gornergrat. Zombili lezi usuku uhambo ukunikela imibono kumnandi Alps, futhi kukhona amanye ukuhlola ukwenza kanye ukhona, kakhulu.
Basel ukuze Chur Izitimela
Bern ukuze Chur Izitimela
ETurin ukuze Tirano Izitimela
Usuku 6 – Schilthorn Switzerland
Ukuze ngosuku lwesithupha yeSwitzerland yakho uhambo, sekuyisikhathi ukubamba ezinye ukubukwa kukhanga ngokwengeziwe kusuka Schilthorn. Catch imoto encane ukuze Schilthorn kusukela Murren futhi ujabulele konke it has ukunikela. A yokudlela ligijima, amaningi wokubuka ezisekelweni, ngisho Bond Umhlaba kungaba wonke itholakala lapha.
Schilthorn kwanele ugcwalise usuku lonke, kodwa uma uzizwa entsha, hlola Lauterbrunnen kanye. Kuyinto ukushaywa ngokusebenzisa esigodini langa egcwele izitobhi mzana nemibono izimpophoma intaba.
Usuku 7 – Jungfrau esifundeni
Usuku 7 kungaba ephelele ngelula ukuvakasha kwakho ku Jungfrau esifundeni nokuqhubeka uhlola-Alps. Kukhona ezinye ethandwa izintaba ungase uthathe Grindelwald. Imoto ikhebula kungathatha nibe Okokuqala Intaba, lapho ungakwazi sithathe esinye eziningi emizileni etholakalayo nokuhamba.
Omunye ezidume kakhulu ngokungangabazeki Bachalpsee Lake ukushaywa, okuyinto uhambo lokuya nokubuya olucishe ukuthi kuthatha 2 amahora. Nokho, kukhona izinto ezimnandi kwezinye izinto Okokuqala, ngakho-ke qiniseka ngijwayele endaweni kahle.
Kumila usuku lwakho yesishiyagalombili 10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi ukuhlola kungaba Wengen, idolobha elincane intaba. Nakuba kule ndawo, ungase uhlole Mannlichen ngokuthatha imoto ikhebula entabeni futhi izintaba emizileni. Kukhona abathile intriguingly okuthiwa, ezifana Royal Hamba.
I-Panorama Trail kusukela Mannlichen ukuba Kleine Scheidegg cishe kakhulu ebabazekayo eyodwa. it unikeza ukubukwa lesigodi ngezansi futhi ezintabeni ezintathu abadumile - the Jungfrau, Monch, futhi Eiger. Kusukela Kleine Scheidegg, sithathe isitimela emuva Wengen.
Usuku 9 – Lucerne
Vala ekupheleni kwesikhathi sakho 10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo, ungafuna ukwenza indlela yakho emuva emizini. Ngoba usuku 9th, sincoma Ukuvakashela Lucerne, njengoba lingumuzi ephelele ukuhlola ngezinyawo. Phela izintaba, ke kuzoba uswidi ukuze zululeka le emigwaqweni befuna nokuzwa efana iSonto St. Leodegar, Museggmauer futhi iNgonyama Isikhumbuzo.
Lucerne has a riverfront omkhulu futhi elinamanzi amaningi nenala sezakhiwo ezinhle. Ngaphezu kwalokho, kungcono stop omkhulu ohambweni lwakho ukuze Zurich, lapho uyobe ophela yakho ukuvakasha.
Usuku 10 – Zurich nosuku lwethu lokugcina 10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo
usuku lwakho lokugcina kufanele kube okukodwa okuphelele, futhi Zurich iyindawo enhle ukuchitha kuyo. Sebenzisa isikhathi ukubona abaningi yayo zomlando zokungcebeleka, ezifana amasonto ka Grossmunster futhi Fraumunster.
Zurich Ubuye yayo abadumile siyothenga emgwaqweni ukuze sipho, ngakho-ke qiniseka ukuthi uthenge okuthile ngaleso Bahnhofstrasse. Hamba ngokusebenzisa Idolobha elidala futhi ujabulele ukuhlola ngaphambi amabombo emuva ekhaya.
Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ukwenza eSwitzerland, uya isikhathi empilweni yakho. khumbula nje ukuhlela imisebenzi yakho, zokuthutha, yobude ukuhlala ngokucophelela. Oluzoqinisekisa ukuthi wakho iholide kuyinto awahluphi futhi okuphumuzayo ngempela, njengoba kufanele kube.
Switzerland iyizwe elihle njalo isihambi kudingeka azibonele. Ingabe uyilungele 10 Izinsuku Switzerland travel? Incwadi amathikithi akho isitimela manje bese uvumele ikhukhuleke ubuhle!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/10-days-switzerland-itinerary/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#traveleurope europetravel SwissAlps trainjourney Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelswitzerland
Business Travel ngu zemininingwane, Izincwajana zemininingwane ezezimali, amathiphu isitimela sokuvakasha